Imililo yehlathi izoba yingozi kakhulu futhi ihlale isikhathi eside ngenxa yokushisa komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Imililo yimicimbi eyenzeka kaningi, ngokwemvelo. Amanye amahlathi nezindawo ezinotshani kungavuselelwa kuphela ngemuva kokushiswa ngumlilo, kepha iqiniso ukuthi kwiplanethi efudumele, lezi zimo zizoba yingozi kakhulu.
Umbuzo uthi, kungani? Kunabantu abaningi ababonakala bethatha intokozo exakile ekushiseni izitshalo nokusongela impilo yayo yonke imvelo, kepha asikwazi ukukushaya indiva lokho Ihlobo elide lisho, ezingxenyeni eziningi zomhlaba, isikhathi eside sonyaka owomile.
Sonke siyazi: amanzi acisha umlilo. Lapho engekho amanzi anjalo, amakhambi, iziqu zezihlahla, konke kungasetshenziswa ngokushesha lapho umbani ushaya phansi. Ngenxa yokwanda kwamazinga okushisa nokwehla kwemvula, imililo izophela kancane kancane ibe "umuthi" wezinto eziphilayo futhi ibe yiphupho elibi.
Ngokusho a isihloko eshicilelwe kumagazini wesayensi i-'Nature ', yakukhombisa lokho indawo ejwayelekile yehlathi elishiswe enyakatho-ntshonalanga ye-United States kuphela kusukela ngonyaka ka-2003 kuya kowezi-2012 yayicishe ibe ngu-5% ukwedlula ngeminyaka engu-1972 kuya kowe-1983; Futhi hhayi lokho kuphela, kepha isikhathi somlilo sakhula sisuka ezinsukwini ezingama-23 kuya ezinsukwini eziyi-116 ngezikhathi ezifanayo.
Yini esingayenza? Well, izinto eziningana. Yize ucwaningo lukhuluma ngemililo eyenzeka e-US, ezweni elifana neSpain nazo ziyizinyathelo ezingathathwa kalula. Kumele ugweme ukwakha ezindaweni eziyingozi, bese utshala isihlahla (noma ezimbili) isikhathi ngasinye lapho kugawulwa umuntu.
Ngokunjalo nemfundo yomphakathi ibaluleke kakhulu: ngeke kusize ngalutho ukuphatha ubungozi bemililo ngokufanele uma abantu bengazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuvikela imvelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukusha kwamahlathi kuzoba yingozi kakhulu futhi kuhlale isikhathi eside ngenxa yokushisa komhlaba
ISiphepho u-Ophelia sihlasela i-Ireland namuhla siphula amarekhodi